Ciidamada Itoobiya dad badan ku xiray gobolka Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada Itoobiya ayaa shalay xiray 15 qof oo gurmad biyo dhaamin ah ka waday tuulooyin hoos taga deegaanka Guriceel ee gobolka Galgaduud. Ma cadda sababta ka dambeysa xarigga dadkaas.
Dadka la xiray waxaa ku jira taliyaha ciidanka booliska dowladda Soomaaliya ee deegaanka Guriceel Muuse Macallin Maxamed.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Fulinta maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca Jaamac Aadan Cabdulle ayaa sheegay inay la kulmeen saraakiisha ciidamada Itoobiya, isla markaana ay dedaal ugu jiraan sidii loo sii deyn lahaa dadkaas.
Deegaanada dadka lagu xiray ayaa ka mid ah meelaha biyo la’aantu ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo meelaha qaar dad haraad ugu geeriyoodeen.
Shan ruux oo aano qabiil loogu dilay tuulada Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose